Ministry of Labor and Social Affairs – Somali Government – Wasaaradda shaqada iyo Arrimaha Bulshada oo soo Gabagabeysey Tababar ku saabsan Nabada iyo Xalinta Khilaafaadka
Wasaaradda shaqada iyo Arrimaha Bulshada iyo Somali Training & Consultancy Organization (SOTCO) oo iskaashanaya ayaa waxay tababar socday labba maalmood u soo gabagabeeyeen 80 arday oo wax ka barata Jaamacadaha kala duwan ee magaaladda Muqdisho. Tababarkan oo ka furmay Hoolka shirarka Jaamacada Soomaaliya ee UNISO ayaa waxaa gabagabadiisa ka soo qeybgalay mas’uulyiin ka socday Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada iyo hey’adda SOTCO.
Ardayda Ka qayb gashay tababarka ayaa waxay ku baranayeen qaabka colaadaha looga diggo iyo sida looga hor tago iyo xalinta Khilaafadka. mid ka mid ah Ardayda waxuu yiri “Waxaan ka faaiideeystay sida Garsoorka cadaalad uga shaqeeyn lahaa una saxi lahaa kiisaska loo keeno iney run yihiin iyo inkale kuwaas oo ah kuwa aan ka faaiidnay”.
Sidoo kale waxaa Tababarkaas Xiritaankiisa ka hadlay madaxa xiriirka tababarada Gudaha ee Wasaaradda shaqada Mr. Cismaan Cabdinuur Axmed (Hidig) waxuuna yiri “ka wasaarad ahaan waxaa inoo faa’iido ah in afkaarta dadka la dhageysto iyo tababarada aynu had iyo jeer ku sameyno gudaha, taasina waa Guul u soo hooyatay Wasaaradda Shaqada”.
Mudane Cabdisamad Adam Isaaq Gudoomiyaha Somali Training & Consultancy Organization (SOTCO) oo isna ka hadlay munaasabada ayaa yiri ” Tababarkan waxa uuna kusoo aaday xili ay Ardayda iyo dhallinyarada aad ugu baahnayd in mar walba loo sameeyo workshop noocyo kala duwan tani waa talaabo hor leh oo ay qaadeen mas’uulyiinta Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada iyo hey’adda SOTCO, waxaan soo dhaweynayaa wada shaqeynta labada dhinac”. Ayuu yiri Guddoomiyaha.
Gabagabadii xaflada Tababarka ayaa waxaa soo xiray Agaasimaha Waaxda Tababarada wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada mudane Ismaaciil Macalin Cabdulaahi waxuuna cod dheer ku sheegay hadaad aragto afar qof oo meel joogaan oo aad weydiiso maxaad rabtaan waxey ku leeyihiin nabad Sidaa darted waa in aan ku dadaalnaa Nabada iyo Dib u heshiisiinta .wuxuuna ugu dambeyn u Mahadceliyey intii ku gacan siisey hirgelinta tababarkaan isagoo Hoosta ka Xariiqey in Tababaro Noocaan oo kale ay ku qaban Ardayda Jaamaciyiinta ah.